BBC Somali - Warar - Barnaamijyada xilliga kala guurka
Barnaamijyada xilliga kala guurka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Oktoobar, 2012, 09:58 GMT 12:58 SGA
Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron, ayaa ku tilmaamay doorashada Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxauud inay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday xagga horumarka hanaanka siyaasadda Soomaaliya. Taageerada caalamka iyo SoomaaliyaMaqal08:35
Qaabka Doorashadu u dhacaysoMaqal04:39
10 ka mid ah musharraxiinta oo hadlayMaqal04:59
31 murashax ayaa qaatay foomamka.
Jawaari oo loo doortay BaarlamaankaMaqal11:21
Yaa u tartamaya Baarlamaanka?Maqal03:36
Waxay ku saabsan tahay doorashada hoggaanka cusub ee Soomaaliya. Maqal14:54
Maanta waxa ku eg waqtigii kama danbaysta ee soo dhammaystirka liiska 275 xubnood ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Xulista xubnaha baarlamaankaMaqal15:45
Barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay muhiimada doorashada iyo halka ay mareyso xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xasan Shiikh ayaa loo doortay Madaxweyne
Qabqablayaasha oo dacwad ka wada maxkamadda sareMaqal03:09
Maxaa ka dambeeya 20 AgoostoMaqal53:24
Waxay ku saabsan tahay doorashada hoggaanka cusub ee Soomaaliya. Maqal15:01
Xubnaha gudiga dastuurka
Xubnaha ka tirsan gudiga loo xilsaaray diyaarinta dastuurka cusub ee Soomaaliya Doorka HaweenkaMaqal11:57
Dood haweenka ay ku leeyihiin siyaasada
Shirka Nairobi oo heshiis lagu gaarey
Shir magaalada Nairobi uga socdey shan kamid ah saxiixayaasha lixda ee Roadmap-ka ayaa lagu heshiiyey in sare loo qaado heerka waxbarasho ee dadka xaqa u yeelan karo in loo soo xulo baarlamaanka.
Dhaarta baarlamaanka Sawirro Muqdisho
Mary Harper ayaa sawirradan ka soo qaadday Muqdisho.
Shuruudaha musharaxa laga raboMaqal03:50
Waxay ila tahayMaqal54:28
Taariikhda Prof. JawaariMaqal02:39
Shariif oo difaacay hoggaamiye kooxeedyadaMaqal03:24
Yaa u tartamaya Guddoomiyaha Baarlamaanka?Maqal03:36
Maxaa laga baran karaa Somaliland iyo PuntlandMaqal15:32
Yaa dib u dhisaya Soomaaliya?Maqal15:49
Xulista xubnaha baarlamaankaMaqal53:49
Digniinta UN iyo AUMaqal03:14